Mkpado: Airbnb | Martech Zone
Nlekọta ụlọ dijitalụ: Otu esi azụta ihe onwunwe post-COVID maka nlọghachi kwesịrị ekwesị
Dị ka a tụrụ anya, ohere na ahịa post-COVID agbanweela. Ruo ugbu a ọ dị ka o doro anya na ọ gbanwere maka ndị nwe ụlọ na ndị na-etinye ego na ụlọ. Dika ichoro ka odi nwa oge na ulo ndi ozo di iche-iche n’aga n’iru, onye obula nwere adreesi — ma obu ulo ezumike zuru oke ma obu nanari ime ulo - ka edoziri nke oma n’udi a. Mgbe ọ na-abịa mkpụmkpụ-okwu mgbazinye ina, e nwere ihe fọrọ nke nta ka ọgwụgwụ na anya. Ọzọkwa, enweghị ọkọnọ na